“Yariisow” oo ku Amaanya Shcabka ka qayb qadshada sugida Amniga – Radio Muqdisho
“Yariisow” oo ku Amaanya Shcabka ka qayb qadshada sugida Amniga
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay laga marmaan tahay in shacabka iyo Ciidaanka xasilinta ay wadda shaqayn buxuda yeeshaan,waxaa u intaa racaashay in ay tabo galisay xasilinta Amniga Caasimaada, iyo in u noqdo mid la isku halayn karo.
“Yarriisow ayaa yiri” waxan u mahadcelinaya shacabka Soomaaliyeed ee u dulqaatay xirnaashaha waddoooniynka u xirmaay sugida Amniga maalmaaha Dabaal dagyada xorriyaad,iyo sida ay u daneynayen ka qayb qadshada shacabka xuska maalmaah lagu xasuusanyo Midowga Umaada Soomaaliyeed.
dhanka kalan waxaa u sheegay in ay qaymayn ku sameyn doono Maalmaahs iyo mudadi sadexda Bilood ahayd ee ay xirnayen waddooyinka Caasimaada, intaas ayuu waxa u ku daray in aysaan surgalilahayn sugida Amniga hadaysan shacaabku aysan gacan ka geysan lahayn ,waxana u ku amaanay shacabka kalinta ay ka qateen Amniga Muqdisho .
laamaha Amniga Gobolka Banaadir ayaa wadda hawlo dib lagu soo celinayo xasiloonida Caasimaada Muqdisho iyo siday shacabku nabad ugu Nolaan lahayen.
Aqoon-Isweydaarsi ku saabsan Dib-u-Eegista Dastuurka oo ka dhacday London “SAWIRRO”
Duqa Muqdisho oo gabi ahaan joojiyay Heshiiyadii lagu bixiyey Jardiinooyinka